Jimmaatti odeeffannoo sobaatin burjaajjiin uumame bu’uura hin qabu- Koomiishinii Poolisii Oromiyaa – Fana Broadcasting Corporate
Jimmaatti odeeffannoo sobaatin burjaajjiin uumame bu’uura hin qabu- Koomiishinii Poolisii Oromiyaa
Finfinnee, Qaammee 5, 2011 (FBC) – Oromiyaa keessatti hiriirri eeyyamame tokkollee akka hin jirre Koomiishiniin Poolisii Oromiyaa beeksise.
Jimmaatti akka waan rakkoon mudatee odeeffannoon tamsa’es soba jedheera koomiishinichi.
Koomiishinar Janaraalli Koomiishinii Poolisii Oromiyaa Kafyaalaw Tafarraan ibsa laataniin akka beeksisanitti, odeeffannoo sobaatin akka waan mana amantaarra miidhaan qaqqabee bilbiluun waamichi taasifamee fi odeeffannoon miidiyaa hawaasummaatin tamsa’e soba jedhan.
Koomiishinar Janaraalichi hiriirri nagaa Oromiyaa keessatti waamamee fi eeyyamame tokkollee akka hin jiraatin ibsaniiru.
Biiroon Dhimmoota Koominikeeshinii Mootummaa Naannoo Oromiyaa gama isaatin guyyaa kaleessaa magaalaa Jimmaatti bataskaanni, fannoo fi konkolaataan gubameera jedhamee ololli deemaa jiru soba jedheera
Magaalaa Jimmaatti manni amantaa gubates hin jiru, meeshaan saamames hin jiru.
Ololichi duula qindaa’aa amantaa dawoo godhachuun jeequmsa uumuuf shira karoorfameedhas jedheera.
Qaamooleen shira kana keessatti qooda qabu jedhaman too’atamaa jiru.
Shira xaxame kana gufachiisuu keessatti hirmaannaan ummataa ol’aanaa ture.
Ummanni keenya ammaas nageenya isaa eeggachuuf tumsa eegale cimsee itti fufuu qaba jedheera biirichi.
Karaa gara biraan amantaa dawoo godhachuun ololli hiriirri gaggeeffamuu fi jedhu mootummaadhaan beekkamtii hin qabu.
Qaamni seeraan hiriira gaafates hin jiru, qaamni hayyamees ta’e eeyyamus hin jiru.
Mootummaan gocha seeraan alaa kamuurratti tarkaanfii seera kabajchiisuu ni fudhata, kanaafis qaama nageenyaaf qajeelfamni kennameera jedheera.
Ummanni keenya odeeffannoo sobaan akka hin dogoggorree fi nageenya isaa eeggachuu akka qabu dhaamsa dabarsinas jedheera.
Ajajaan Poolisii Magaalaa Jimmaa Koomaandar Abduraazaaq Naggaan gama isaanitiin, odeeffannoon miidiyaa hawaasummaatin gadhiifame soba ta’uurra darbee hawaasa barootaf walkabajaan waliin jiraate walitti buusuuf shira xaxamedha jedhaniiru.
Ummannis oduu dharaatin osoo hin burjaajja’in, nageenya naannoosaa akka tiksu dhaamaniiru.